Microneedle RF Factory - Sina Microneedle RF Mpanamboatra, mpamatsy
sano Microneedling sehatra RF miatrika fanavotana ny hoditra Microneedle RF
Hamafiso sy hamafiso ny hoditrao - Masinina manainga ny tarehy Microneedle RF
Ny teknolojia microsededling Pinxel-2 RF dia manao tahaka ny tsy misy lohahevitra (na koa mpameno), izay manentana ny kôlesterônan'ny vatanao sy ny haavon'ny elastin mba hitsaboana ireo fambara taloha amin'ny fahanterana. Ny hoditra toa tanora kokoa, hentitra kokoa. Ary ny firafitra, ny tonony ary ny mazava, nohosorana, nohazavaina ary nohatsaraina.
Fitaovana miovaova Microneedle RF vaovao sano pinxel-2 masinina fanandratana tarehy masinina
Ny angovo RF dia manafana ny sosona ambanin'ny hoditra, miteraka fanenjanana sy fanamafisana ny hoditra, ary koa ny fanentanana ny famokarana collagen sy elastin. Satria aterina lalina ny angovo RF, dia afaka mamokatra vokatra haingana kokoa izay manaitra kokoa.
Microneedle RF FAMAROTANA TSY MISY FIVORIANA TSY MISY FIVORIANA REVOLUTIONARY
Mitsabo tsara ny karazana hoditra rehetra
Fomba fitsaboana telo natao ho an'ny hodi-doha, tarehy ary vatana
Ny fanjaitra fanjaitra dia tsy mametra ny isan'ny pulses
Motera robotic amin'ny taranaka ho avy ho an'ny traikefa nahafinaritra kokoa an'ny marary
Ny fitsaboana dia azo alefa haingana hatramin'ny 25%
Ny saran'ny fividianana kely indrindra dia mampitombo ny ROI amin'ny fampiharana anao
Pinxel-2 Secret RF dia rafitra mikraoba amin'ny radio matetika (RF) ho an'ny fifangaroan'ny taolana sy ny heostasis natao hanentanana sy hanavao ny collagen ary hiatrehana ireo famantarana mahazatra amin'ny fahanterana. Mety tsara raha ampiasaina amin'ny marary izay maniry hamelombelona sy hamelombelona ny fisehoan'ny hodiny amin'ny karazan-koditra rehetra. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fanjaitra micro, ny RF Secret dia afaka mamoaka angovo amin'ny halaliny isan-karazany, mba hahafahan'ny fitsaboana mifanaraka amin'ny olan'ny marary tsirairay toy ny tsipika tsara, ny ketrona, ny fery amin'ny mony, ny sary ary ny striae amin'ny halalin'io takiana io.
masinina miakatra vaky fantsom-bokotra kely masinina Volom-borona RF microneedle
Rafitra fanjaitra RF sombin-javatra amin'ny alàlan'ny famolavolana manokana ny fanjaitra mariky ny fanjaitra maro, ny maotera nomerika haingam-pandeha mifehy ny baiko amin'ny alàlan'ny epidermis sy ny dermis marina hifehezana ny halalin'ny 0,5-3 mm, indray amin'ny faran'ny famoahana ny fanjaitra RF, mandrisika collagen sy elastika vita amin'ny elastika ary tsy fahasimbana amin'ny hafanana azo avy amin'ny hoditra. Rehefa vita ny fizotran'ny hoditra, azo antoka ny sosona epidermaly, afaka miditra amin'ny dermis ny angovo RF, manentana ny hyperplasia proteinina collagen, tsy ny fomba tsara indrindra hanatsarana ny fery ihany, fa ny ketrona hoditra mihamafy mandritra ny fotoana lava no nampisy ny tsara fomba.
Masinina Microneedle Rf MFR SFR Microneedle Fractional Machine Intracel Rf Micro Needling
Microneedle RF RF tapaka Teôria fitsaboana MFR Collagen fitsaboana fitsaboana
Rehefa apetaka amin'ny hoditra izy io, eo ambanin'ny fanatoranana eo an-toerana na eo an-toerana, dia fanjaitra Micro-steril no ampiasaina hamoronana fantsona mikroskopika maro ao anaty dermis ao amin'ny hoditra, izay manentana ny vatanao hamokatra collagen vaovao tonga amin'ny fanavaozana ny hoditra, amin'izay mahatonga ny hoditra miseho vaovao sy tanora kokoa. Fanjaitra voarindrina sy tsy voaroaka, fanjaitra manindrona mampiditra fotoana hanomezana vokatra azo antoka sy azo antoka mba hialana amin'ny fiantraikany amin'ny epidermis na sela hafa.
Varotra mafana 2021 radio matetika fribolana microneedling RF hoditra manamafy hoditra
Fitsaboana fampidirana SFR Collagen
Ny fantsom-pifandraisana SFR tsy manam-paharoa dia manome hery RF ho an'ny Epidermis sy dermis superfical misy effets synergistic, ka miteraka hoditra mamirapiratra ary mihidy mafy.
Mekanisma fanasitranana maratra amin'ny alàlan'ny angovo RF Koa satria voaravaka ny fanjaitra Mikraoba, afa-tsy ny tapany (0.3mm), ny elektrôla-fanjaitra mikraoba dia manome angovo bipolar hidina lalina hatrany amin'ny dermis nefa tsy misy simba amin'ny epidermis. Ny angovo RF manapoaka kely dia mamorona electrocoagulation amin'ny dermis izay manamora ny fizotry ny fanasitranana ratra voajanahary. Ny WHM dia mampiroborobo ny fanavaozana ny collagen sy ny fihenan'ny ratra, izay manatsara ny fahamoran'ny hoditra. Tsy vitan'ny hoe mandrisika ny fanavaozana ny dermal ihany fa ny RF manakana ny fiasan'ny fihary sabora koa hanatsara ny mony.
Pinxel Fractional RF Microneedle Device miaraka amin'ny fanjaitra insulated / CE nekena ho an'ny radio matetika RF radio matetika ho an'ny tarehy
Pinxel microneedle RF masinina:
–Ny masinina PINXEL microneedle RF dia manome hafanana mivantana na epidermis na dermis miaraka amin'ny halalin'ny fifehezana azy ho azy avy eo amin'ny 0,5mm ka hatramin'ny 3mm.
–Ny fahita matetika amin'ny radio frizionaly mahomby dia ahafahana manatratra ny lamina fitsaboana tapaka sy maharitra.
–Mampiasa ny fampiasanao izany amin'ny alàlan'ny fanomezana risika kely indrindra amin'ny fihenan'ny fotoana sy ny fanaintainana na inona na inona karazana hoditra.
Pinxel-2 Microneedle RF sy Fractional RF milina
jaky microneedle RF fitaovana sanhe CE teknolojia RF fragional RF mihinjitra marika fanesorana microneedle milina
1. Fanesorana ny holatra, fanesorana ketrona
2. Fanesorana ny marika mihinjitra
3. Fampihenana ny mason-koditra lehibe, fanavaozana ny hoditra
4. Fanandratana tarehy, fanamafisana ny hoditra, famerenana amin'ny hoditra
5. Fanesorana pigmentation.
Co2 Laser Laser miato, Laser estetika Co2, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Masinina mpanentana hozatra Ems, Shr Ipl Opt, fanesorana ny holatra,